MR MRT: TrainingaHorse Trainer - မြင်းဆရာကို ဆုံးမခြင်း
TrainingaHorse Trainer - မြင်းဆရာကို ဆုံးမခြင်း
ကေသိဝဂ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် (စတုက္ကနိပါတ်)
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် “ကေသိ”မည်သော မြင်းဆရာကြီးထံသို့ ကြွတော်မူ၍ တရားဟောတော်မူ၏။
မြတ်စွာဘုရား ။ ။ “ကေသိ သင်ဟာ ကျော်ကြားတဲ့ မြင်းဆရာကြီးပဲ။ မြင်းတွေကို ဘယ်လို ဆုံးမသလဲ။”
ကေသိ ။ ။ “အရှင်ဘုရား . . . မြင်းရိုင်းကို အနုနည်းနဲ့လည်း ဆုံးမပါတယ်။ အကြမ်းနည်းနဲ့လည်း ဆုံးမပါတယ်။ အနု အကြမ်း နည်းနှစ်မျိုး ရောပြီးတော့လည်း ဆုံးမပါတယ် ဘုရား။”
မြတ်စွာဘုရား ။ ။ “ကေသိ . . . တကယ်လို့ မြင်းရိုင်းကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဆုံးမလို့ မရဘူးဆိုရင် အဲဒီမြင်းကို ဘယ်လိုလုပ်သလဲ။”
ကေသိ ။ ။ “အရှင်ဘုရား . . . ဆုံးမလို့ မရတဲ့ မြင်းရိုင်းကို သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ် ဘုရား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တပည့်တော်တို့ မြင်းဆရာ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် နာမည် မပျက်အောင်လို့ပါ ဘုရား။
အရှင်ဘုရား . . . အရှင်ဘုရားဟာ လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါတွေကို ဆုံးမတဲ့ နေရာမှာ အတုမရှိသူပါ ဘုရား။ ဆုံးမသင့်တဲ့သူကို ဆုံးမပြီဆိုရင် အရှင်ဘုရား ဘယ်လို ဆုံးမပါသလဲ ဘုရား။”
မြတ်စွာဘုရား ။ ။ “ကေသိ . . . ငါလည်း အနုနည်း၊ အကြမ်းနည်း၊ အနုအကြမ်းရောတဲ့နည်းတွေနဲ့ပဲ ဆုံးမပါတယ်။
ကာယသုစရိုက်ကို ဟောတယ်။ ကာယသုစရိုက်ရဲ့ အကျိုးကို ဟောတယ်။
၀စီသုစရိုက်ကို ဟောတယ်။ ၀စီသုစရိုက်ရဲ့ အကျိုးကို ဟောတယ်။
မနောသုစရိုက်ကို ဟောတယ်။ မနောသုစရိုက်ရဲ့ အကျိုးကို ဟောတယ်။
ဒါက အနုနည်းနဲ့ ဆုံးမတာပဲ။
ကာယဒုစရိုက်ကို ဟောတယ်။ ကာယဒုစရိုက်ရဲ့ အကျိုးကို ဟောတယ်။
၀စီဒုစရိုက်ကို ဟောတယ်။ ၀စီဒုစရိုက်ရဲ့ အကျိုးကို ဟောတယ်။
မနောဒုစရိုက်ကို ဟောတယ်။ မနောဒုစရိုက်ရဲ့ အကျိုးကို ဟောတယ်။
ငရဲ တိရစ္ဆာန် ပြိတ္တာအကြောင်း ဟောတယ်။
ဒါက အကြမ်းနည်းနဲ့ ဆုံးမတာပဲ။
သုစရိုက်၊ ဒုစရိုက်တွေကို ဟောတယ်။ သုစရိုက်၊ ဒုစရိုက်တို့ရဲ့ အကျိုးဖြစ်တဲ့ လူ့ရွာနတ်ထံအကြောင်း နဲ့ ငရဲ တိရစ္ဆာန် ပြိတ္တာအကြောင်း ဟောတယ်။
ဒါက အနုအကြမ်း နည်းနှစ်မျိုးနဲ့ ဆုံးမတာပဲ။”
ကေသိ ။ ။ “အရှင်ဘုရား . . . သုံးနည်းလုံးနဲ့ ဆုံးမလို့ မရတဲ့သူကို ဘယ်လိုလုပ်ပါသလဲ ဘုရား။”
မြတ်စွာဘုရား ။ ။ “ကေသိ . . . ငါလည်း ဘယ်နည်းနဲ့မှ ဆုံးမလို့ မရတဲ့သူကို သတ်ပစ်လိုက်တာပဲ။”
ကေသိ ။ ။ “အရှင်ဘုရား . . . ဘုရားဆိုတာ သူတစ်ပါးအသက်ကို မကောင်းဘူး မဟုတ်လား ဘုရား။”
မြတ်စွာဘုရား ။ ။ “မှန်တယ် . . . ကေသိ။ မသတ်ကောင်းဘူး။ တကယ်တော့ . . . ငါက နည်းသုံးနည်းနဲ့ ဆုံးမလို့ မရတဲ့သူကို ဆုံးမထိုက်သူလို့ မသတ်မှတ်တော့ဘူး။ ငါတင်မကဘူး အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ သီတင်းသုံးဖော် မိတ်ဆွေတွေကလည်း အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆုံးမထိုက်သူလို့ မသတ်မှတ်ကြတော့ဘူး။ အဲဒီလို အသိအမှတ် မပြုဘဲ ထားလိုက်တာကို သတ်ပစ်လိုက်တယ် ခေါ်တာပဲ”
ကေသိ ။ ။ “မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ပညာရှိတဲ့ သီတင်းသုံးဖော် မိတ်ဆွေတွေက အဲဒီလို အသိအမှတ် မပြုဘဲ ထားလိုက်တာဟာ အပြစ်ကင်းတဲ့ သတ်ပစ်နည်းပါပဲ အရှင်ဘုရား . . .။ အရှင်ဘုရားရဲ့ တရားတော်ဟာ တကယ့်ကို နှစ်သက်စရာ ကောင်းလှပါတယ် ဘုရား . . .။
အရှင်ဘုရား . . . ဒီနေ့ကစပြီး တပည့်တော်ရဲ့ တစ်သက်တာလုံး ရတနာသုံးပါးကို တပည့်တော် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါတယ် ဘုရား . . .။”
Posted by Ashin Acara. at 5:34 AM
Labels: 01A. Pali - ပါဠိတော်